प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई सोंपाल समाज युकेको सम्मान
लन्डन । सोंपाल समाज युकेले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको छ ।
गत आइतबार ४ जुनमा गोल्डेनसिप रेस्टुरेन्ट आयोजित स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा नेपालबाट युके आएका मेघा बैंकका बोर्ड अफ डिरेक्टर ईश्वर गुरुङ (प्रेमराजा), उनकी आमा राजकुमारी गुरुङ, सोंपाल तमु समाज पोखरा अध्यक्ष मे. लक्षिमप्रसाद गुरुङ तथा श्रीमती हुमकुमारी गुरुङ, मावि दरौँका भूपू प्रधानाध्यापक कमल गुरुङ तथा श्रीमती प्रेमकुमारी गुरुङलाई सम्मान गरिएको हो । उनीहरुलाई सोंपाल समाज अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा स्वागत गरिएको थियो ।
दिउँसो १२ बजे उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङको स्वागत मन्तव्यबाट कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सम्मान कार्यक्रम जेष्ठ व्यक्तिबाट सुरु गरिएको थियो । राजकुमारी गुरुङ, सोंपाल तमु समाज पोखरा अध्यक्ष मे. लक्षिमप्रसाद गुरुङ, सोंपाल तमु समाज पोखराका आमा टोली अध्यक्ष हुमकुमारी गुरुङ तथा भूपू प्रधानाध्यापक कमल गुरुङ तथा प्रेमकुमारी गुरुङ र मेघाबैंकका निर्देशक ईश्वर गुरुङ (प्रेमराजा)लाई समाजका सल्लाहकार तथा आमा टोलीको संयोजक नईन्द्र गुरुङ तथा सहसंयोजक इन्द्रवती गुरुङबाट महिलाहरुलाई खादा र क्रमु दियर सम्मान गरिएको थियो ।
जेष्ठ व्यक्ति चन्द्रबहादुर गुरुङ (बेझांग)द्वारा खादा तथा समाजका उपाध्यक्षद्वय श्रीप्रसाद गुरुङ र युक्तबहादुर गुरुङबाट मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ । अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले सबै पाहुनाहरुलाई खादा तथा मायाको चिनो दिने प्रबन्ध मिलाएका थिए । कार्यक्रम मन्तव्य राख्दै सोंपाल तमु समाज, पोखराका अध्यक्ष लक्षिमप्रसाद गुरुङले सोंपाल समाजको उपलब्धि चर्चा गर्दै सोंपाल समाजहरुबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पोखरेली सोंपालका व्यक्तिहरुले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै गुरुङले उहाँहरुबाट सोंपालवासी गर्व गर्नलायक बनेको दाबी गरे । रिटायर्ड मेजर लक्षिमप्रसाद तमुधिं नेपाल संरक्षक, तमुधिं युके नेपाल संयोजक, गोर्खा संस्था नेपाल अध्यक्ष, गोर्खा ओर्गानिक फर्म तथा रिसर्च काभ्रेलगायत पनि पनि आबद्ध छन् ।
मेघा बैंकका निर्देशक ईश्वर गुरुङले शैक्षिक क्षेत्रदेखि व्यापार, व्यवसायमा स्व. चित्रबहादुर गुरुङले गरेको योगदानको विषयमा चर्चा गरे । उनले समाजमा सबै एकढिक्का भएर गएको खण्डमा सबैलाई फाइदा हुने बताए ।
उनले सिरुवारी मूल निवासी स्वर्गीय सुवेदर मेजर गम्भीरसिंह गुरुङले पञ्चामुलमा वि.सं. १९८७ सालमा राणाशासनको अवस्थामा पनि भाषा स्कुलको स्थपना गरी त्यस भेगका बासिन्दालाई शिक्षाको सुरुआत गरेकोमा सबैले सम्झनुपर्ने बताए । उनी मुनलाईट माध्यमिक विद्यालयका संस्थापक प्रधानाध्यापक, नेस्फिल्ड अन्तर्राष्ट्रिय कलेजका संस्थापक उपाध्यक्ष, सोंपाल समाज काठमाडौँका संस्थापक अध्यक्ष, शैक्षिक विकास सहकारी लगायत संस्थामा संलग्न छन् ।
भूपू प्रधानाध्यापक कमल गुरुङले समाजले भव्य स्वागत गरेकोप्रति आफूहरु धेरै खुसी भएको भन्दै समाजलाई धन्यवाद दिए । उनले गुरुङ जातिले आफ्नो भेषभुषा र रहनसहन चलनचल्तीलाई बिर्सन नहुनेमा जोड दिए । वेम्ब्ली रेप तेजबहादुर गुरुङबाट हल, ओमकर गुरुङबाट फोटोग्राफी, सहसचिव भरत गुरुङलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जिम्मेवारी निभाएका थिए ।
अन्तमा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले संस्थाको निमन्त्रणा स्वीकारी उपस्थिति जनाएका पाहुनालगायत सबैवर्गमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरेका थिए ।